Abaal-marin lagu bixinayo akhbaar ku saabsan dilka Avijit Roy iyo weerarka Rafida Bonya Ahmed
Faalladani waxay ka tarjameysaa aragtida Dowlada Mareykanka.
Iyada oo u mareysa barnaamijkeeda Abaalmarinta Caddaaladda, ayay waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ku yabooheysaa abaalmarin dhan $5 milyan dollar, ciddii soo gudbsa xog horseedi karta xariga ama maxkamadeynta qof walba oo ku lug leh weerarki argagixiso ee lagu qaaday Avijit Roy xaaskiisa Rafida Bonya Ahmed oo labaduba ahaa muwaadiniin Mareykan ah.
Weerarka oo ay geysteen kooxo ku hubeysnaa baangado ayaa ka dhacay magaalada Dhaka ee caasimadda Bangladesh, 26-ki Febraayo ee sannadki 2015-ki. Laamanaha ayaa xillgaasi ka qeybgalayay munaasabad ku saabsaneyd Bandhig Buugaag. Avijit Roy ayaa lagu dilay weerarka halka Rafida Bonya Ahmed six un loogu dhaawacay.
Avijit Roy wuxuu ahaa qoraa, maqaal qore website iyo dhaq-dhaqaaqe u ololeeya Xorriyatul-qowlka Bangladesh. Wuxuu wax ka abaabulay bannaanbaxyo caalami ah oo sare loogu qaadayay wacyigelinta indha kusoo jiidista qorayaal mulxidiin ah oo lagu xiray Bangladesh. Wuxuu kaloo caan ku ahaa naqdinta caburinta bulshada.
Abaalmarinta Caddaaladda waxay ku dhawaaqeysaa in Roy “la bartilmaameedsaday isla markaana loo dilay waxyaabaha uu aaminsanaa ee uu u ololeynayay.”
Laba koox ayaa sheegatay masuuliyadda weerarka lagu khaarijiyay. Mid ka mid ah waa Ansarullah Bangla Team, ee loo gaabiyo ABT, waa urur argagixiso oo ka jira Bangladesh kaas oo xarjireeya dhalinyarada si ay u dilaan kuwa lagu shabadeeyay cilmaaniyadda. Isla markiiba, hogaamiyaha hadda dhintay ee Al-qaacidada qaar-hoosaadka Hindiya ama AQIS, ayaa baahiyay muuqaal si weyn loo faafiyay, kaas oo uu ku sheegtay in taageerayaasha AQIS oo ay ku jiraan kuwa aanan walila xirin ay mas’uul ka ahaayeen.
Sannadki 2016, Waaxda Arrimaha Dibadda ayaa u aqoonsatay AQIS koox Argagixiso Caalami ah, iyada oo u cuskatay xeerka 219 ee Socdaalka iyo Jinsiyadaha, iyo Amarka Madaxweyne ee tirsigiisu yahay 13224 ee gaarka u ah Argagixisada Caalamiga ah, kaas oo awood u siinaya dowladda in ay cunaqabateyso aragixisada iyo kuwa taageerada argagixisada iyo ficillada aragisixanimo.
Tan iyo marki la sameeyay 1984, Barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda ayaa bixiyay adduun lacaged oo kor u dhaafaya $200 million oo la siiyay in ka badan 100 qof oo bixiyay macluumad waxgal ah oo ka caawiyay in laga hortago weeraro argagixiso, lagu keenay caddaaladda argagixiso isla markaana xalliyay khatar amni oo kusoo wajahneyd Mareykanka.
Haddii aad heyso macluumaad ku saabsan weerarka argagixiso ee lagu beegsaday Avijit Roy iyo Rafida Bonya Ahmed, fadlan farriin qoraal u reeb RFJ adiga oo u maraya khadadka Signal, Telegram, ama Whatsapp waxaadna ku dirtaa nambarkaan +1 (202)702-7843. Ama e-mail-ka info@rewardsforjustice.net.
Dhammaan macluumaadka waxay noqon doonaan kuwo si adag loo xafido.